Hoggaamiyaha Alshabaab Oo Markii U horreysay Codkiisa La Maqlay Iyo Farriimo Jihaad ah Oo Uu U Diray Jihooyin Kala duwan | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Hoggaamiyaha Alshabaab Oo Markii U horreysay Codkiisa La Maqlay Iyo Farriimo Jihaad ah Oo Uu U Diray Jihooyin Kala duwan
Waxaa Uu Soo Diray Cajallad Xambaarsan Fursad Ka Faa’iideysatay Xeer Ay Xukuumadda Federaalka Ahi Ansixisay
Hargeysa (Hubaal/ANN) – Hoggaamiyaha Cusub ee Xarakada Al Shabaab Abuu Cubeyda, ayaa markii u horaysay jeediyay hadal dheer oo la xidhiidha dhacdooyinka iyo dagaallada ay ururrada xagjirka adduunku ka wadaan caalamka, khaasatan kuwa Al-shabaab iyo Urur weynaha ay ka tiran yihiin ee Al-Qaaida. Abuu Cubeyda oo aan warkiisa la maqal tan iyo markii uu xilkaasi qabtay bishii September sanaddii 2014 xiligaasi oo duqeyn Mareykanku sameeyay uu ku shahiiday Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr Amiirkii hore ee Xarakada Al Shabaab, wuxuu fariintiisa kaga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo guud ahaan bariga qaaradda Afrika.
Sida ay xambaarsanayd khudbad lagu baahiyey degelka ay maamulaan xarakada Alshabaab ee loo yaqaanno Al-kataa’ib waxaa uu Abuu Cubeyda oo hadlakiisa soconayay muddo 44 daqiiqo ah cinwaan uga dhigay “Shahaada ama Shariicah”, taasoo dhadhan ahaan laga soo duubay maalmihii ciidul-fidriga. Waxaanu munaasibadda ciida awgeed bogaadiyey mujaahidiinta caalamka ee furimaha dagaalka joogta sida Afghanistan, Jaziiratul Carab, Maghribul Islaam, Shaam, Qowqaaz iyo goobo kale.
Intaas ka dib Amiirka ayaa si kooban ka hadlay xaalada guud ee dalka Soomaaliya oo uu ku sheegay in uu hirdan ka socdo xilligan. “ Waxaa la wada ogsoon yahay wixii dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulkan ay soo mareen, laga soo bilaabo gumeysigii, xukuumadihii is-xigay hogaamiye-kooxeedyadii Mareykanku adeegsanayey, illaa laga soo gaadho gumeysiga cusub ee uu hadda wadanka ku jiro. “Marna ma dhicin in dadka Muslimiinta ah ay is dhiibaan Jihaadka aan maanta ku jirnana wuxuu la xidhiidhaa, Imtidaad iyo dhameystirna u yahay Jihaadkaas soo jireenka ah ee ay awoowayaasheen iyo Aabayaasheen kula soo jireen gaaladii xilligooda joogtay”. Sidaa ayuu yidhi, hoggaamiyaha alshabaab.
Khudbada Abuu Cubayd meelaha ay taabatay waxaa kamid ahaa xeerkii xiisadda abuuray ee dhawaan ay xukuumadda Soomaaliya Ansixiyey “Waxaa intaas sii dheer in Xukuumada Muqdisho ka jirtaa ay ansixisay shuruuc Akhlaaq kasta oo wanaagsan oo Umaddan lahayd tirtireysa, baneyneysana Anshax-xumo halka ugu sareysa, Waxay ansixiyeen wax xitaa ay ka xishoodeen, kana hor yimaadeen dowladaha Kiristanka ah qaarkood” ayuu yidhi Sheekh Abuu Cubeyda.
“Waxaa shisheeya loo gacan geliyey dhaqaalihii wadanka hormuud u ah Turkiga oo xubin firfircoona ka ah xulifada NATO oo ah awood Military oo loo sameystay sidii Muslimiinta loogu gumaadi lahaa, Waxaana intaas sii dheer in ay horboodayeen duulaankii mareykanku uu hogaaminayey ee lagu soo qaaday Muslimiinta Soomaaliya sagaashameeyadii. 1993-dii, General Bir oo dhalashadiisu Turkey tahay ayaa ahaa taliyihii korkacayey ciidamadii huwanta ahaa oo ka koobnaa in ka badan 30,000 oo askari oo laga kala keenay ku dhawaad 36 dowladood” ayuu yidhi Amiirka Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab”. Ayuu codkiisa ku yidhi hoggaamiyehani. Waxyaabaha kale ee uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa maamul gobolleedyada deegaannada soomaaliya laga hirgeliyey, doorka ay dawladda Itoobiya ku leedahay maamulladaas la magacaabay iyo qorshahooda uga meel yaalla.